ဥရောပသမဂ္ဂ၌ ရာထူးကြီးများ ခန့်ထားနိုင်ရေးတွင် လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်မှုများရှိနေ - Yangon Media Group
”ဒီရာထူးတွေမှာ ဘယ်ကပဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မှန်မှန်ကန် ကန်မဲဆန္ဒပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်” ဟု လက်ရှိဥရောပသမဂ္ဂမဟာမင်း ကြီး ဒေါ်နယ်တပ်စ်ကပြောဆိုလိုက် သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂတွင် ဘယ်လ် ဂျီယံ၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိနှင့် စပိန်နိုင်ငံ များသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ် ကြသည်။
”တချို့ရာထူးတွေမှာ ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတွေ နှစ်ဦးသုံး ဦးတို့အထဲက တစ်ယောက်ကို မှန် မှန်ကန်ကန်ရွေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်”ဟု ပြင်သစ်သမ္မတ မက်ခရွန်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ပီခရို ဆန်းချက်ကမူ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဆိုရှယ် လစ်ဝါဒီဖရန်ဆွာတင်မာမန်းစ်ကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ ”ဖရန်ဆွာဟာ သူ့နိုင်ငံမှာ သာမက ဥရောပသမဂ္ဂမှာပါ ခေါင်း ဆောင်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိသူ ပါ”ဟု ၎င်းင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။
စင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖခင်လောင်း ဝန်ထမ်းဖြစ်သူအား မီးဖွားခွင့်ကဲ့သို့ လစာပြည့်ဖြင့် 'ဖခင်ခွ??
အီရန်အပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ပျက်ပြားစေပါက ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမည်ဟု ဟောင်ကောင်ကို အမေရိကန?
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ရသည့် ဌာနအကြီးအကဲများ အဂတိ လိုက်စားမှု ??